Fanaraha-maso ny pesta amin'ny fahasalamana
Tena sarotra vonoina ny Thrips? Ireo fomba azonao andramana
Ny Thrips dia iray amin'ireo bibikely mankahala indrindra an'ireo tantsaha, satria saika mihinana voankazo sy legioma avokoa izy ireo, ary mampihena ny vokatra. Ka misy fomba mahomby ve? Ahoana ny fampiasana azy tsara hanatsara ny vokatra? Sarotra ny misoroka sy manasitrana. Voalohany indrindra, ny fahatakarana ny ...
Fironana sasany momba ny famonoana bibikely
amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 20-12-16
Fizarana 1: Fanavaozana isan-kerinandro ny vidin'ny akora famonoana bibikely any Sina. Miaraka amin'ny vanim-potoanan'ny varotra, manomboka mividy, mitahiry ary mamokatra ny ozinina famokarana. Satria ireo dingana rehetra ireo dia mitranga ao anatin'ny vanim-potoana somary mifantoka, ny orinasa dia nandany ny fanisana ny vokatra sasany sy ny produ ...
Awiner-orinasa mpamono bibikely
Mombamomba ny orinasa SHIJIAZHUANG AWINER BIOTECH CO., LTD dia orinasa mpamokatra agrochemical matihanina izay misehatra amin'ny indostrian'ny agrochemical, manam-pahaizana manokana amin'ny famonoana bibikely, herisetra, Fungicides, PGR ary vokatra fanaraha-maso ny bibikely ary mamatsy endrika samihafa: EC, SL, SC, WP, SP, WDG, EW, FS, ULV sns ...
Momba anay-serivisy sy kalitao
F1: Manana mari-pankasitrahana momba ny famonoana bibikely ve ianao? Valiny: Ie. F2: Ahoana ny fifandraisana aminay? Tsindrio ny Alibaba "Contact Supplier" Ary alefaso aminay ny hafatra mahaliana anao, hahazo valiny ianao ao anatin'ny 24 ora. F3: Ahoana ny serivisinao? Manome serivisy 7 * 12 ora izahay ary wh ...
Tricyclazole 75% WP, Lambda-Cyhalothrin 95% TC, Cyromazine 75% WP, Agrochemical, Abamectin 3,6% EC, Emamectin Benzoate 70% TC,